Isiseko seBongo: inkqubo yokuvuza iqhuba ukuziphatha kwethu Umvuzo weZiseko
Ikhaya Basics Brain umvuzo System
Ukuqonda ukuba kutheni siqhutyelwa ukutya okuhlwayileyo, ukuthintela ngothando, umnqweno wesondo, utywala, i-heroin, iifostile, i-tsokolate, ukugembula, imidiya yoluntu okanye ukuthengwa kwe-intanethi, kufuneka siyazi malunga nenkqubo yokuvuza.
The inkqubo yokuvuza yenye yezona nkqubo zibalulekileyo kwingqondo. Iqhuba indlela yethu yokuziphatha kwizinto ezinomdla njengokutya, isini, utywala, njl njl. Kwaye iyasiqhubela kude nezo zibuhlungu (ungquzulwano, umsebenzi wesikolo, njl. Njl. Kulapho sivakalelwa khona kwaye sisebenzise ezo mvakalelo ukuqala okanye ukuyeka isenzo. Iqukethe iqela lezakhiwo zobuchopho kwingqondo yengqondo. Balinganisa ukuba bangayiphindi na indlela yokuziphatha kwaye benze umkhwa. Umvuzo sisikhuthazo esiqhuba inkanuko yokutshintsha indlela yokuziphatha. Imivuzo ihlala isebenza njengabaqinisi. Oko kukuthi, basenza siphindaphinde isimilo esibona (ngokungazi) silungile ukuze siphile, nangona bengekho. Ubumnandi ngumvuzo ongcono okanye ukhuthazo kunentlungu yokukhuthaza isimilo. Iminqathe ingcono kunentonga njl.
Kwinqanaba lomvuzo wenkqubo striatum. Ngummandla wengqondo ovelisa iimvakalelo zomvuzo okanye ulonwabo. Ngokusebenza, i-striatum ilungelelanisa imiba emininzi yokucinga esinceda ukuba sithathe isigqibo. Oku kubandakanya intshukumo kunye nokucwangciswa kwamanyathelo, inkuthazo, ukomeleza, kunye nembono yokufumana umvuzo. Kulapho ingqondo inobunzima bexabiso lesishukumisi kwi-nanosecond, ukuthumela 'ukuya kuyo' okanye 'ukuhlala kude' imiqondiso. Eli candelo lobuchopho litshintsha kakhulu njengesiphumo sokuziphatha gwenxa okanye ukuphazamiseka gwenxa kweziyobisi. Imikhwa eye yaba yimigca enzulu luhlobo lokufunda 'kwezifo', oko kukufunda okungalawulekiyo.
Le nkulumo encedisayo ye-TED kwingxoxo Umgibe Wenjabulo.
Iyiphi indima ye-dopamine? I-Dopamine yinkqubo ye-neurochemical ebangela umsebenzi kwingqondo. Yile nto isebenza ngayo inkqubo yomvuzo. Inemisebenzi eyahlukeneyo. I-Dopamine yeyona 'go-get-it' ye-neurochemical eqhuba ukuba ivuselele okanye ivuze kunye nokuziphatha esikudingayo ukuze siphile. Imizekelo kukutya, isini, ukubopha, ukunqanda iintlungu, kananjalo kukwangumqondiso osenza sihambe. Umzekelo, abantu abanesifo sika-Parkinson abayiqhubekisi ngokwaneleyo i-dopamine. Oku kubonakala njengeentshukumo ezi-jerky. Ukuphindaphindwa kweempinda zedopamine 'zomeleza' iindlela zendlela ukusenza ukuba sifune ukuphinda indlela yokuziphatha. Yinto ephambili kwindlela esifunda ngayo nantoni na.
Ilungelelaniswe ngononophelo kwingqondo. Eyona ithiyori iphambili ngendima yedopamine yile ukhuthazo ithiyori. Imalunga nokufuna, ungathandi. Uvakalelo lolonwabo ngokwalo luvela kwindalo opioids kwingqondo evelisa imvakalelo yovuyo okanye ephezulu. I-Dopamine kunye neeopioid zisebenza kunye. Abantu abane-schizophrenia bathambekele ekuveliseni i-dopamine kwaye oku kungakhokelela kwisaqhwithi sengqondo kunye neemvakalelo ezigabadeleyo. Cinga ngegolide. Ibhalansi. Ukuzinkcinkca ngokutya, utywala, iziyobisi, iphonografi njl njl kuyomeleza ezo ndlela kwaye kungakhokelela ekubeni likhoboka kwezinye.
Dopamine kunye noNwabo
Isixa se-dopamine esikhululwe ngongqondo ngaphambi kokuziphatha sixhomekeke ekubeni sinakho ukubonelela ngokuzonwabisa. Ukuba sinovuyo ngento okanye umsebenzi, imemori eyenziwe ithetha ukuba silindele ukuba kuya kuba mnandi kwakhona. Ukuba i-stimulus iyaphula ukulindela kwethu-iyolonwabo okanye ayikho mnandi-siza kuvelisa i-dopamine engaphezulu okanye ngaphantsi kwexesha elizayo xa sihlangabezana nokuvuselela. Iziyobisi zihlawula inkqubo yokuvuza kwaye zivelise amazinga aphezulu e-dopamine kunye ne-opioids ekuqaleni. Emva kwexesha ubuchopho buya kusetshenziselwa ukuvuselela, ngoko ke kufuneka uninzi olungakumbi lwe-dopamine ukuze lufike phezulu. Ngeziyobisi, umsebenzisi ufuna enye into efanayo, kodwa ngoononophelo njengento yokuvuselela, ingqondo ifuna entsha, eyahlukileyo kwaye iyantyantya okanye iyamangalisa ukuba iphakame.
Umsebenzisi uhlala eleqa imemori kunye namava okuqala okuphezulu, kodwa uhlala ephelile. Andikwazi kufumana u… .kwaneliseka. Umsebenzisi naye unokuthi, emva kwexesha, 'afune' iphonografi okanye utywala okanye icuba, ukuhlala entloko yentlungu ebangelwa yi-dopamine ephantsi kunye neempawu zoxinzelelo zokurhoxa. Kungoko umjikelo okhohlakeleyo wokuxhomekeka. Kumntu osebenzisa iziyobisi okanye oxhomekeke ekuziphatheni, 'ukubongoza' ukusebenzisa, okubangelwa kukutshintsha kwamanqanaba edopamine, unokuziva ngathi 'ubomi okanye ukufa' ukusinda kwaye kukhokelele kwizigqibo ezimbi kakhulu zokumisa iintlungu.
Umthombo Ophezulu weDopamine
Owona mthombo uphambili we-dopamine kule ndawo iphakathi kwengqondo (i-striatum) iveliswa kwindawo yecandelo le-ventral tegmental (VTA). Emva koko iya kwi-nucleus accumbens (NAcc), iziko lomvuzo, ekuphenduleni kwimbono / kwi-cue / kulindelwe umvuzo, kulayishwa i-trigger elungele isenzo. Isenzo esilandelayo-umsebenzi wemoto / wokuhamba, owenziwe ngumqondiso ovuyisayo 'hamba uyokuyifumana,' okanye umqondiso wokuthintela, ofana 'nokuma', uya kugqitywa ngumqondiso ovela kwicortex yangaphambili xa sele ilwenzile ulwazi. Okukhona i-dopamine ikwiziko lomvuzo, kokukhona isikhuthazo siziva njengomvuzo. Abantu abaneengxaki zokuziphatha ezingalawulekiyo, okanye iziyobisi, bavelisa isibonakaliso esibuthathaka kakhulu kwi-cortex yangaphambili ukuthintela umnqweno okanye isenzo esingxamisekileyo.
<< Iikhemikhali ze-Neurochemicals Ubunzima bobutsha >>